Droflex Spronttek Akwa Akwa Ahịa | Rayson
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. Droflex Springtox Playsi sportsing na anyị ga-eme ike anyị niile ijere ndị ahịa ozi na usoro niile si ngwaahịa, R & D, inyefe. Nnabata ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa ngwaahịa ọhụrụ anyị Droflex Spriontek Spriontek ọnụego ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị. Ngwaahịa nwere nkwado ahụ chọrọ. O gafeela ule nnwale nke chọrọ ngwaahịa a ka ọ bụrụ ndị ọrụ nkịtị iji lelee nhichapụ ya.